Jumbo Cylinder Cascade, China Jumbo Cylinder Cascade abavelisi, abaxhasi, Ifektri - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
I-SinoCleansky jumbo cylinder Cascade iveliswa ngokwe-ISO11120, DOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela elilinganayo lomntu wesithathu.
Iimveliso zisetyenziswa kakhulu ekumiseni indawo yokugcina izinto, kwaye zinokuyilwa ngokusekwe kwisicelo esineenkcukacha zabaxumi, kwaye uluhlu olubanzi lokugcwalisa okuphakathi lubandakanya i-CNG kunye neegesi ezahlukeneyo zeshishini ezinjengeArgon, iNitrogen, iHelium, iHydrogen, iGesi ehlanjululweyo njl.
Icascade inokuba zizilinda ezibini, iisilinda ezintathu, iisilinda ezine, kunye nesilinda ezintlanu. Ukuba ngaphezulu iisilinda ezintandathu, ngokubanzi, inokuyilwa njengetyhubhu skid kunye nesakhelo sobungakanani besikhongozeli.
I-jumbo cylinder cascade ingahanjiswa zizikhongozeli eziqhelekileyo, izikhongozeli ezivulekileyo eziphezulu, okanye imithwalo eninzi ngokusekwe kubungakanani. I-cylinder cascade iya kuhanjiswa kunye nokukhuselwa okhethekileyo xa kukho isitya.
Sinoluhlu lwemveliso esele lukhona ukuze ulujonge kwaye ukhethe; Okanye ungasixelela ukuba kufuneka ukugcwalisa okuphakathi / uxinzelelo olusebenzayo / umthamo wamanzi, emva koko siya kuncoma imodeli efanelekileyo kuwe;
Luhlobo luni lwegesi eya kusebenzisa olu hlobo lwecascade?
I-cylinder cascade ingasetyenziselwa i-CNG kunye neegesi ezahlukeneyo zorhwebo ezinje ngeArgon, iNitrogen, iHelium, iHydrogen, iGesi ecociweyo njl.
Kwisithuba seenyanga ezili-18 ukusukela ngomhla wokuthunyelwa okanye kwiinyanga ezili-12 emva kofakelo (thatha ixesha eliphela kuqala njengomhla obekiweyo), phantsi kofakelo olufanelekileyo kunye nokusetyenziswa, sinikezela ngenkonzo yokulungisa simahla yokusilela kwemveliso. Ukuba ubungakanani beodolo yakho bukhulu, sinokuthumela injineli kwindawo yakho.